Dood qaran – Qeybtii 7aad | Qaranimo Online
Dood qaran – Qeybtii 7aad
August 3, 2012 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: QOL Admin Cabdulqaadir Aaden Mohamuud “Jangeli”
Waxaa albaaka soo garaacay dadkii uu sugayaye Abdi Bafto oo meelkale inta ku wada ballamay babuurkii Bile iyo Suuban soo wada raacay. Intay jidka soo maryeen yey-isweydiiyeen in Diiriye Hingo u tagay Abdi Bafto oo ka hormaray ayaga iyo inkale, waxayna badankood isku raaceen in aan Diiriye Hingo gafayn ballankii Abdi Bafto ooguud ahaan caadada afmaalayaasha-na ma aha in ay ballamada madaxda gooyaan Diiriye Hingo-na kuma-ba jiro oo sidiisu ballamada ugu fiicanyahay oo waqtiga u dhowraa.
CABDI BAFTO: Soo dhawaada ikhyaartoy. Hadded inkasta oo aan dadaalaayo hadana gogoshii Suuban iyo Cunnadii macaanay oo ay iska soo dabaridaysay meesha kuma hayo oo waad garankartaan meesho waa hudheel.
SUUBAN: Wallahi hudheelkaan-ba yareysane ma guribaa lagu soo sameeyey cunadaan?
CABDI BAFTO: Waad garatay Suuban, Allow caqliga ha kaa qaadin. Gabar Alle maqaade ah oo aan qaraaba nahay ayaa cunnadaan soo diyaarisay, gogoshana sidaan u sharaxday.
BILE: Cabdi Baftow, Diiriye Hingo kuuma imaan miyaa, waxaan fileynay in uu kula joogee?
CABDI BAFTO: Maye waa ii yimid ee anaa alaab suuqa ugu dirsaday oo waa soo dhowyahay.
CARTE: Maanaan yaabin sida Diiriye Hingo u maqnaankaro!
GORGOR DILE: Waaba kanaa war dhegta isqabo Diiriye Hingow!
DIIRIYE HINGO: Kolley ifaaninmeyne maxaad igu xamaneysay Gorgor Dilow?
CABDI BAFTO: Xaashaa Lillahi, xan xagga iska dhig, maadaa nin la xamankaro ah ee waa la-iskaa weydiiye?
CABDI BAFTO: Walaalyaal aad baad u mahadsantihiin, sharaf-bayna ii tahay in aan qolkaan hoyga hatan ii ah idinku soo dhaweeyo. Intaas kaddib, Diiriye Hingo oo aan saaka oo dhan isla jeexjeexaynay arrimaha ka taagan Soomaaliya oo ay ka midyihiin meelmarinta Dastuurka iyo ololaha doorashada. Hadaba aniga oo huba in Dastuurka la ansixindoono haddi Alle idmo, inkasta oo Diiriye Hingo qabo in dhib weyn ka imaandoono dhinaca dowlad goboleedyada federaalka ah oo qabyaaladda kusaleysan dad badanina ka walwalsanyihiin wax ka dhimman ama ku siyaadaha ah hadana waa maryaa sidaan ugu talagalnay oo ah sife aan marna la diidikarin. Tan Doorashada madaxatinimada Soomaaliya, wuxu Diiriye Hingo i xasuusiyey in aysan horey u dhicin in madaxweynaha iyo Raiisulwasaaraha Soomaaliya aysan marlabaad weligood xukunka ku soo noqon markii waqtigoodu dhammaado, haddi aan dib u jalleecay dhacdooyinkii horayna aan u soo marnayna arrintaas waa run. Talo waangsan oo aan ku qancayna Diiriye Hingo waa isiiyey.
SUUBAN: Qofba meel baa u darane walaalow haweenka Soomaaliyeed oo 58% ah shacabkeena, laguse qanciyey in loo qoondeeyo 30% xildhibaanada la soo doorandoono xaggee xaalkoodu marayaa. Odayaal dhaqmeedkuse ma ogalaadeen in ay meel iska dhigaan arrintaas oo aan lagu xad-gudbin?
DIIRIYE HINGO: Suuban ma kuu dhabaa, darjada siyaasadeed la-is-kuma hadiyeeyo addunyadaanna waa aduunyo raggu isa siiyey illaa hadder, waxaydaan dagaal iyo howl u gelinna cidi hadiyad idinku siinmeyso. Dowladda uu Cabdi Bafto nagala joogo maantay iyo qaramada midoobay wakiilkeeduba haddi ay dhab ka tahy u qoondeynta dumarka 30% xildhibaanada Soomaaliya waxay ka jarilahaayeen 82.5 ama 67.5 intaysan u gudbin odyaal dhaqmeedka tirada guud ee xildhibaanada oo ah 275 ama 225 kii la isku raaco. Waxaan u maleynayaa idinka ayaa laydin-ku-sasabaayaaye wax la idiin ogolyahay in aysan jirin oo duco qaato aya ugu dambeysta la-idin-ku-orandoona. Dhowr dumara ah oo samri waayeyna hal hal baa lagu tuuri doonaa ee ogaada haddi aydaan dagaal dhab ah u tafa-xeydaneyn war iyo cabasho-toona wax ku helimaysaane.
SUUBAN: Oo xildhibaan barkiisna mana siisay Diiriyey Hingow, maxay tahay 82.5?kkkk
DIIRIYE HINGO: Tirada xildhibaanada say u dhigeen baa saas ku imaaneysa. Waa rag illaahay jecleysiiyey barka! Bal adigu garo 4.5 waxay ku hindiseen. Haddey dhexdhexaadka isugu celicelinlahayeen 225 iyo 275 xisaabto waxay noqoneysa 250 (225+275=500:2= 250) oo waa la helikara tiro sugan oo waxay noqon lahayd 75 in loo qoondeeyo dumarka, lakiin ma rabaan ee waxay rabban lugooyada iyo iskadaba- wareega in Soomaalidu ku jirto.
SUUBAN: Wallahi waa yaab! Meshaan caqligii toosnaabaa nala ka suuriyey.
DIIRIYE HINGO: Immisaan idin sheegayey war murtiyeedkii Daahir Riyaale ee ahaa in Soomaaliya aysan ciidan ajnabi u baahneyn ee caqli taliya u baahantahay.
CABDULLAHI: Anna waxaa ii daran sida Dustuurkaan aad hubtid in la ansaxindoono sidii uu ula-jaanqaadayo wadahadalka Somaliland iyo TFG ama dowladda dhalandoonta. Maxaad ugu deg-degeysaan maa dastuurka lagu jaangooyo wax ka soo baxa wadahadlkaan bilowday.
DR.MUKHTAAR: Anna waxaa ii daran xildhibaanadu yey noqondoonaan? Ma waxay noqonayaan dadkii Soomali haalkaan dhigay oo dagaalka sokeeye hormuudka ka ahaa ama hoggaamininaayey, haatan ka mid ah baarlamaanka jira mise dhiig cusub oo Soomaali qarnimadeeda badbaadiya inta Ilaahay la kaashada ayaa la doorandoonaa.
DIIRIYE HINGO: Dottore, odiyaal dhaqmeedyadaan soo xula xildhibaanada la yiri ma waxaad mooday in cidkale ay yaqaanin. Dib u jaleecso ii-dhehda bilyanka doolar lagu bixiyo oo bini aadamka miskaxda ka qabsata, soo ma ha aragti ama maqal loogu cel-celiyo shay muddo dheer? 20 sano odayaal dhaqmeedku magacayada dagaal oogayaasha oo geesiyada reerka qabiiladu u yaqaaniin cid aan ahayn ma’ay maqal mana garankaraan la’aantooda sida qabiilku u baraarikaro. Ragaani wixii ay soo boobijireena waxay wax ka-siinjireen odayal dhaqmeedka beesha; marka ma waxaad u maleyneysa in ay ku badalayaan nin Soomaaliya ka hadlaya ama dhaafsanyaan will Jaamicaddi Gahayr ama Oxford, Harvard ama Jaamicadda Isli (Eastleigh) oo aad adigu wax ka dhigtid? Maya, maya ha u fadhiyin taas. Horaa loogu talagay in aan Soomaaliya waxba laga baddalin ee ay jug-jug-teedaas ahaato oo sidaas ku baab’ado.
BILE: Waa rune Odayaashaani cidkale ma yaqaaniin aan nimankaas barakaca ama boobka xoolaha ummadda ku hayey rubuc qarnigaan dambe. Anigu markaan arkay cidda gacanta loo geliyey aayihii Soomaaliya oo odayaal qabiil wax aan ahayn ku fakarey qaranimana miskaxdoodaba Ilahay ka saaray ayaan gartay in aan Soomaaliya la rabin in ay kacdo.
CABDULLAHI: Hadded see isbadel u imaanayaa haddi raggi 10 sano u dambeeyey xildhibaanada aha, curinawaayey isbadal mudaas dheer horeyna badankood dagaal oogayaal ahaayeen?
DIIRIYE HING: Aniga runtaa la igu necbyahay, horraan Suuban baan ugu sheegay haddaysan dumarka Soomaaliyeed dagaal ugu tafaxaydan qeybtooda baarlamaanka sina uma helayaan 30%. Ragga aqoonta leh oo doonaya in isbadal wanaagsan ka dhaco Soomaaliyana waxaan u sheegayaa in Mahiga iyo Shariifyo-toonuhu waddadii Soomaaliya isu baddalilahay hayn. Waxaa la idin ka rabaa ragga astaamaha dagaal oogidda ama boobka ku caan baxay la soo bandhigo magacyadooda,odaashana looga digo in aysan soo gudbin magacyada raagas belaayada ku caan baxay.
GORGOR DILE: Diirye Hingo, waxaan moodayey in aad dhaqanka Soomaalida si fiican u taqaanind. War qolowaliba nimankaan aad sheegeysid geesiyadii reeraha ayey u yaqaanin, ayaguna saas bay u ogsoonyihiin in cid ka mudanina aysan jirin marka la yiraahdo qabiiladu ha soo magacaabeen madaxdooda. Ha ku daalin cid dhaqaajinkartaa ma jirto raggaane. DIIRIYE HINGO: Ha oran saas! Miyaadan arag Maxamed, Saddam, Abdullahi, Zine El Abdine, Qadaafi, Mubaarak, Abdalla iyo kuwa hadda daba socda oo uu ka mid yaahay Bashir Assad meesha ay mareen. Haddanu u tafaxaydanno wallahi bay dhumasho galilahaayeen. Innagaan weli u soo jeensan ragaas iyo waxaan ka qabanlahayn. Waxay ku abaadi doonaan xabsi, welibi lagu xiro waddamo ajnebi ah haddaysan inta goori goortahay isdabaqaban oo u banneyn kuraasta dhalinyarada qaranka wax u qabankarta. Dheriga haddi karku ka bato waad taqaanin waxa dhicikara.
GORGOR DILE: Diiriye Hingo, Xukunku iyo darajado siday dadka u indhotiraan miyaadan aqoon?
DIIRIYE HINGO: Ma aqaan saan weligay xukun iyo darajo-toona ma qabane!KKKkkkk!
GORGOR DILE: Hadded waa halkaas mesha la iska maandhaafayo. Aniga iyo Cabdi Bafto na weydii arrintaas. In xoog naloo ka qaado mooyaane, baryo iyo sasabasho, wadaninima iyo waxbaa ku gaaridoona iyo wax la mid ah loogama haro ama tago darajooyinka.
BILE: Marka ma waxaad leedihiin hala soo bandhigo magacyada dambiilayaasha Soomaalida inta goori goor tahay caqli ku tegimayaane odayaal dhaqmeedkuna cid kale kuma baddalaayaan oo waa halyeeyadoodii ay dadka ug jeclaayeen mudda dheer raggani.
DIIRIYE HINGO: Caqli in ay ku tagaan ha sheegin in la muuquuniyo mooyaane.
CABDULLAHI: Aan u soo jeedinno beesha caalamka iyo odiyaal dhaqmeedka in ragaani aysan Soomaali dhibta ka saarikarin; muddo dheer oo ay xildhibaano ahaayeen aysan hayn wax aan ficilo iyo iskadabawareeg darajo raadin salka ku haysaa sidii loo boobi lahaa hantida beesha caalamku Soomaalida ugu deeqday.
DIIRIYE HINGO: Haddi dhagaha faraha la-gashado oo raggan la soo magacaabo maxaa dhicikara?
SUUBAN: Dherigii baa Karidoona, dhibta Soomaaliyana way sii badan ayana meel xun bay ku dambeyndoonan ee taas ha la ogaado.
Waxaa dabasocota qaybtii VIII (sideedaad)
Other Interesting posts:Qarax qasaare geystay oo ka dhacay agagaarka Isbit...Somali tale of two cities as Mogadishu's vulnerabl...Peace returns to MogadishuMunaasabada 1da Luulyo oo si weyn looga Xusay dalk...Rush to Judgment and the Distortion of Facts: Read...Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo is casilay!Khudbadii R.W Gaas kajeediyay munaasabadii xiritaa...Somalia’s True Political HeavyweighWafdigii shalay booqday Marko maxaa soo gaaray?Madaxweyne Xasan "Aqoonsiga Dowlada Soomaaliy...Who is responsible the killing of Sheikhs?LIVE on C-SPAN3: Terrorist Threat in Somalia Socialize	Posted by QOL Admin on August 3, 2012. Filed under Warka Maanta.